चुनाव पछाडीका परिदृष्य हरु: किन खोसियो देविका केसीको पद ? - Ek Jamarko
Home / विचार / चुनाव पछाडीका परिदृष्य हरु: किन खोसियो देविका केसीको पद ?
चुनाव पछाडीका परिदृष्य हरु: किन खोसियो देविका केसीको पद ?
धनि संस्था एनआरएन का गरिव मतदाता हरु -
नेपालमा नबस्ने बिदेशमा बसेबास गरेका र विदेशी नागरिकता पासपोर्ट ग्रहण गरेका कारण मातृभुमी संग कागजी रुपमा टाढीएका जरो र किलो नेपाल भएका तर गैह्र नेपाली नागरीक हरुको संजाल थियो सुरुमा "गैह्र आवासीय नेपाली संघ" । जसै जसै यो धनिहरुको संगठन विश्वब्यापी हुँदै गयो त्यसमा समेटीने नेपाली हरुको परिभाषा पनि फेरीदै गयो ।
जव यो संगठनको नजर खाडी र मलेशीया लगायतका मुलुकमा श्रम गर्ने ठुलो संख्याका नेपाली हरुमा पर्यो आफ्नो संगठनको पहुँच संसारभर पुर्याउने एक किसीमको लालसाले गाँज्यो तत्कालिन अगुवा हरु लाई।
त्यही अवसरमा संस्थापक अध्यक्षले खाडीमा मेनपावर सप्लाई गर्ने वसोबास नेपालमै भएका तर खाडी तिरको विर्षीक वसोवास अनुमती पत्र प्राप्त गरेका केही पैसावाल नेपाली मेनपावर ब्यवसायी हरु फेला पारे । तिनीहरुका पार्टनर हरु कोही कोही खाडी पुर्णकाल बसोवास गर्ने हरु पनि थिए । दलाल हरु संग तत्कालीन अवस्थामा अथाह पैसा थियो । मेरै आँखा अगाडी नेपाल बाट जहाजै भरेर श्रमीक आपुर्ती गर्ने अनी दोहाका तारे होटलमा बस्ने र कतै हिड्नु पर्दा भाडाको लिमुसीन कार चढ्ने केही श्रमीक सप्लाई गर्ने दलाल हरु एनआरएनका सदस्य भए र खाडीमा संगठन विस्तारका लागी दिलोज्यान फालेर लागी परे ।
हालांकी ति दलाल हरु अहिले एनआरएन कार्यसमीती बाट बाहिर रहेका होलान तर पनि संस्थामा मुख्य हालीमुहाली उनि हरुकै रहेको छ । जस्तो की - को उमेद्वार बन्ने,कस्ले कुन पदको टिकट पाउने या कस्ले नपाउने ईत्यादी कुरामा निर्णाय उनीहरुकै हुने गर्दछ । किनकी एनआरएन भन्दा माथी उनिहरु ले पार्टीको टिको लगाएका छन । एमालेका प्रवासी अगुवा बनेका छन ! कुनै दलाल कांग्रेस र कुनै माओवादीका कार्यकर्ता बनेका छन कुनै अगुवा हरु ।
अहिले तत्कालीन मेनपावर सप्लायर हरुको परिभाषा फेरिएको छ ! दोहा का सम्मानीत ब्यबसायी बनेका छन् उनीहरु ! कम्पनि साहु हुनुको महत्व नै बेग्लै हुन्छ दोहामा ! नेपालि श्रमीक हरु कन्ट्रक्सन कम्पनि हरुलाई सप्लाई गरेर मनग्य धन आर्जन गरेर आफ्नो सामाजीक र आर्थिक हैसियत लाइ एकाएक माती पुर्याएका ब्याबसायी हरु नै अहिलेको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभावी भएको देखियो !
जव अगील्लो कार्यकालको चुनाव जित्न टिवी कार्की र शेष घले ले दलको टिको लगाए त्यही समय देखी नै एनआरएन दल विशेषको संस्था बनेको हो ! श्रमीकको त यो पहिल्यै देखी थिएन । दलाल हरुको थियो खाडीमा अव राजनैतिक झोला बोक्ने हरुको हुन गयो भन्ने कुरामा दुईमत थिएन ।
मैले तत्कालिन अवस्थामा पनि एनआरएनमा खाडी क्षेत्रको प्रतिनिधीत्व भन्दै आदरणीय टिवी कार्कीले अध्यक्षमा गरेको दावेदारीको आलेचना गरेको थिएँ । खासमा त्यो आलोचना थिएन । मेरो मनमा लागेको र मैले देखेको कुरा मेरो ब्लगमा पोखेको मात्र थिएँ जसरी अहिले लेख्दै छु..!
तत्कालीन समयमा टिवी कार्कीको आईसीसी अध्यक्षको लागी परेको उमेद्वारी जति औचित्यहीन मलाई लागेको थियो यो पटकको चुनावमा भने मलाई खाडीमा (एनआरएन) गैह्र आवासीय नेपाली संघको उपस्थिती नै औचित्यहिन छ भन्ने लाग्यो ! नेपाली हरुलाई एकतावद्द गर्न संस्था चाहिने नै हो भने यो संस्थाको नाम "गैह्र आवासीय नेपाली श्रमीक संघ" हुनुपर्दछ ! नत्र यो संस्थाको उपस्थीती र औचित्य दुवै कुरा मलाई चित्त बुझेन !
म कतई खुशी हुन सकीन एनआरएन कतारको त्यो दयनिय अवस्था देखेर ! किननकी - मतदाता हरु जो मतदान गर्न नेपाली राजदुताबास बाहिर देखीए त्यसमध्ये ८० प्रतिशत मतदाता ले एनआरएन भनेको के हो त्यो थाह नपाएको देखीयो ।
बाहीर पसिनाले लोथपोथ परेर घाममा डढीरहेका एकजना मतदाताले गुनासो पोखे कम्पनीका म्यानेजर/साहु चुनाव उठेका छन । नाम उनैले भरीदिए ईन्टनेट बाट । पासपोर्ट पनि उनै संग छ । कार्ड ल्याएर हातमा थमाईदिए ..ई तिमी पनि एनआरएन हौ भने ..मैले टाउको हल्लाएँ !हुन त त्यो ५५ रियल उनले मेरै तलव बाट काटे ..तै पनि साहु हुन ..ठुला मान्छे.. नेता होउन र गरी खाउन भनेर भोट हाल्न आएको ! विहानै गाडीले एम्बेस्सी ल्याएर छाड्दीयो ! मैले लाईनमा बसेर भोट दिएँ तर अहिले मलाई रुम सम्म लैजाने गाडी अर्को खेप मतदाता लिन गएको कारण साहुले केहीबेर पर्खन भन्नुभाछ भन्दै पसीना पुछ्दै गरेका उनी पनि गैह्र आवासीय नेपाली नै हुन ।
त्यो अवस्थामा भेटीएका मतदाताले आफ्नो साहु भन्दा बाहेक कसैलाई भोट दिएनन किनकी साहुले आफ्नो नाम भको ठाममा ठिक लगाउन सिकाएका थिए र भनेका थिए अन्त चिनो लगाउदा मतपत्र विग्रन सक्छ मेरोमा ठिक लगाएर छाडीदिनु ...!! ...चाँडो गाडी आए त रुममा जान हुन्थ्यो भोकले टाट परियो...खुईय सुस्केरा हाल्दै एनआरएन गुन्गुनाए आजको ड्युटी नै यही हो मेरो त ...!
यो पटक भने एनआरएनका पुराना दलाल हरुलाई केही नयाँ मजदुर केटा हरु र केही ब्लगर अनि कलाकार हरुले हरुले चुनौति नै दिएछन । टाठा केटाहरु जुर्मुराएछन ..आखीर संस्थामा हामी किन नजाने ? सल्लाह गरेछन न उमेद्वारी ठोकेछन । हेर्दा हेर्दै छिचौरा भनिएका केटा हरु र उठ्दैनन होला भन्ने सोचेका कलाकार हरुले उमेद्वारी दर्ता गराएरै छोडेछन् ! दलाल हरुको लागी चुनौती बनेर ठडीएछन । कुनै उपाय चलेन दलाल हरुको ..! केटा हरु पाखा नलाग्ने नै भए । हारे पनि उमेद्वारी त दिने नै हो । सामाजीक संजालमा दह्रो पकड भएका र केही कम्पनिमा ब्यबस्थापकको ओहदामा काम गरेका फुच्चे हरुले दलाल हरुलाई यसरी हायल कायल पारेछन ।
केटा हरु विद्वत छन ..टरररर बोल्छन ! जागीर अर्काको गरेका होलान तर नयाँ पुष्ता बुझेका, कुनै त ब्लगमै सही गजप लेखेर समाजमा पहिचान बनाएका यस्ता युवा हरुले ठाडै चुनौति दिएपछी अत्तालिएका पुराना एनआरएन अगुवा हरुमा त हलचल नै पैदा भएछ । कसरी कन्ट्रोल गर्न सकीन्छ यी केटा हरुलाई ? आईडिया फुराएछन ..ल दलको ट्याग भिराईदिउँ ! अनी बिद्वत भनिएका पत्रकार हरु नयाँ पुष्ताका भनिएका युवा हरु र कलाकार हरु समेत कुनै "एमाले" को ट्याग भिरेर चुनावमा उत्रे, कुनै कांग्रेस-माके कुनै मधेसी कुनै जनजाती ...अन्तीममा आएर देखीयो दलाल हरुले दलालै बनाउन नसकेपनि दलको कार्यकर्ता चाहीं बनाईछाडेछन ... मतपत्रमा ठिक लगाउनु अगाडी ह्वास्स गन्हाएको राजनैतिक दुर्गन्ध लाई नाकका प्वाल बन्द गरेरै पनि भोट त दिनै पर्यो !
बैंक स्ट्रीट बाट भोट दिन आएका बिस जनाको झुण्ड यौटा कुनामा छट्पटाईरहेको थियो । त्यत्तीकैमा यौटा हेण्डसम सुकीलो केटो घाँटीमा "उमेद्वार" को बिल्ला भिरेर अगाडी आयो । भोट दिईसक्नुभएको छैन भने मलाई भोट दिनुस भनेर माग्यो । झुण्डले मतदान गरिसकेको रहेछ । उसको नाम सोधे, उसले आफ्नो नाममा चिन्ह लगाएको नमुना मतपत्र देखायो ! त्यो हेरेर आफु हरुलेले उसलाई पनि भोट दिएको सुनाए । उमेद्वारले पत्याएन ..झापाको यौटा भाईले फोटै खिचेर ल्याएको रहेछ । फोटो देखाएपछी उमेद्वार विश्वस्त भयो । मतदाता १५ जनाले एकछाप उसलाई भोट दिएको बताएपछी उसको अनुहार उज्यालो भएर आयो । त्यत्तीकैमा त्यही टोलीको अर्को मतदाता बोल्यो ! सर गाडी छैन हामीलाई घर सम्म जान गाडीको ब्यबस्था गरिदिनु पर्यो ...अगी सम्म उज्यालो अनुहार भएको उमेदवार एकाएक अँधेरीयो ! उसको अनुहार खग्रास ग्रहण लागेको चन्द्रमा जस्तो भयो ..। 'हस म गाडीको ब्यबस्था गर्छु' भनेर त्यहा बाट अलप भएको उमेदवार फेरी फर्केर आएन..उसका गरीब मतदाता हरु घाममा डढीरहे ...! दलाल भएको भए उसले गाडी ब्यवस्था गर्ने हैसीयत राख्थ्यो ..यो केटो जागीरे हुनुपर्छ त्यसैले भाग्यो ..मैले मन मनै गम खाएँ ।
जसै म मतदान गर्न भित्र छिरें ..देख्छु तृतीय उपाध्यक्षकी उमेदवार बैनी देविका केसी मत खसाल्दै रहिछन । उनलाई विश्वस्त तुल्याउन सुरुमा उनको नाममा ठिक लगाएँ ! उनी जत्तीको महिलाले एनआरएनमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसीकता उनले उमेदवारी दर्ता गरेदेखी कै हो । म आश्था ले कांग्रेस तर देविका केसी एमाले को प्यानल बाट चुनाव लडेकी रहिछन । मलाई फरक परेन । म चार पाँच जना उमेद्वारको नाम चिनेर भोट दिन गएको थिएँ । त्यसमा एकजना "नन्द ढुंगाना" पनि थिए ! उनी मेरा मित्र हुन तर उनीपनि एमालेकै प्यानल बाट चुनाव लडेका रहेछन ! आस्था लाई थाँती राखेर नन्द ढुंगानाको नाममा ठिक को चिन्हो लगाएँ ।
अझ रमाईलो त के भयो भने कतिपय कांग्रेस केटा हरुले पनि मतदान गरिसकेपछी आफुले मतदान गरेको उमेदवार एमालेको भएको अथवा एमाले भाई हरुले आफुले मतदान गरेको उमेद्वार कांग्रेस भएको थाह पाए ! उनीहरु लाई खासै चासो पनि भएन कीनकी उनीहरु त्यहा आफ्नो हाकीमको आग्रहमा हाकीमका साथी हरुलाई भोट दिन गएका थिए ! राजनिती र दल संग के सरोकार भयो र ! कलाकार देविका केसी संग फोटो खिचाउन केही भाई हरुले रहर गरे तर उनले समय मिलाउन सकीनन ..तालु सुक्ने घाममा केटा हरु थप निरास नहुन भनेर मैले अर्को पटक अफीसमै बोलाएर फोटो खिचाईदिने बाचा गरें ...! मलाई थाह छैन चुनाव पछी देविका ले फोटो खिच्ने समय देलीन या नदेलीन ..!! (साँझ पर्यो – चुनाव सकियो)
कथा देविका केसी को - एउटी महिला उमेदवारले मलाई भोट नदेउ नदेउ भन्दा भन्दै सबैंबन्दा बढी मत ल्याएर अत्यन्तै लोकप्रियताका साथ चुनाव जित्छीन ! उही लोकप्रिय उमेदवार लाई विज्ञप्ती निकाल्न लगाएर आफु संग ठुलो मतान्तरले पराजीत उमेदवार नै विजेता हो भन्न लगाईन्छ ! नौ सय बढी मत पाउने देविका केसी विजेता की छ सय मात्र मत पाउने केशव ढकाल विजेता ? मतदान प्रकृयामा भागै नलिदा र मलाई मत नदिनुहोला भनेर फेसबुक मै लेख्दा त देविकाको नौ सय मत आयो अझ सक्रीयता पुर्वक भोट मागेर थप जालझेल समेत गरेको भए पुरै मतदाता ले उनैलाई भोट गर्ने रहेछन । त्यस्तो लोकप्रिय उमेदवार लाई के कति कारणले र कस्को अनी कस्तो दवावले कार्य समीतीमा नबस्ने विज्ञप्ती निकाल्न बाध्य पारीएको हो ?-दोहाका सम्पुर्ण एनआरएन हरु जान्न चाहन्छन । - (तिलु शर्मा पौड्यालको फेसबुक बाट)
अर्को प्रश्न के पनि भने के अव देविका ले थुकेको तृतिय उपाध्यक्ष पद नराम्रो संग पराजीत केशव ढकालले खुशी खुशी चाट्छन की चाट्दैनन हेर्नु बाकी छ ! हुन त लाज हराएको समाज हो ! जे पनि हुन नसक्ला भन्न सकीन्न । अव केशव ढकालले त्यही मतादेशको आधारमा सपथ खान्छन यदी भने त्यो त जुठो चाट्नु बराबर नै हो भन्नु बेग्लै दृष्टीकोण रह्यो । (अर्को एउटा फेसबुक कमेन्ट)
दोहा मा बस्ने "एनआरएन" हुन लायक ब्यबसायी र बुद्दीजिवी हरुले देविका केसीको बारेमा "सिधा कुरा" उठाउन सक्दैनन ! किन भने एक त उनिहरु उत्पातै कुटनैतिक बन्न खोज्छन अर्को -चुल्ठा मुन्द्रा आतंक ले भोली ब्यबसाय मा बाधा अड्चन आउला भनेर उनिहरुको सातो गएको छ । नत्र एउटी महिला उमेदवार जो अत्याधिक मतका साथ जितेर पनि पराजित लाई कार्यकाल सुम्पिन बाध्य छन त्यस्तो उमेदवार जुनसुकै दलको प्यानल बाट उठेको भएपनि यो एक कार्यकाल उनी कार्यसमीती भित्र रहनु उनलाई भोटर ले प्रदान गरेको अधिकार हो । उमेदवारी दर्ता जुन सुकै प्यानलमा रहेर गरेको भएपनि जित पश्चात उनी आम लेपाली हरुकी उमेदवार हुन ।उनले कार्यसमीती भित्र सम्मानित स्थान पाउनुपर्छ भनेर सोझो कुरो गर्ने अवस्था सामाजीक अभियन्ता र एनआरएन अगुवा हरुलाई किन पनि छैन भने "राम्रो जागीर" भएका एनआरएन हरु "मारमुंग्री" को आरोपमा डिपोर्ड हुनुपर्ने हुन सक्छ या ब्यवसायी हरु समेत "ब्यवहार" को कारण पलायन हुनुपर्छ भन्ने डर ले तैं चुप मै चुप भएका छन/हुन ! एनआरएनको ईतिहासमै यो सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा हुन गएको छ । (मेरो निजि बिचार)
कुनै कुराको डर नभएका स्वतन्त्र मजदुर हरु जो साँच्चैका देविका केसीका मतदाता थिए उनिहरुले यो कुरा थाहै पाएका छैनन। थाहा पाएपनि उनिहरुको दविएको आवाज सम्वन्धित निकाय सम्म पुग्दैन त्यो सबैलाई थाह छ -एनआरएन पाखुरे हरुको मात्र संस्था हो की मतदाता हरुको पनि हो ? यदी साँच्चै मतको कदर गर्ने हो भने देविका केसी लाई विना सर्त पदवहाल गरियोस होईन भने यो अराजक एनआरएनको कुनै औचित्य छैन दोहा मा ।(आम मतदाताको बिचार)
चुनाव पछाडीका परिदृष्य हरु: किन खोसियो देविका केसीको पद ? Reviewed by Durga Pangeni on सितंबर 03, 2017 Rating: 5